XOG CULUS: Wasiir ka tirsan P/land oo qarxiyay sirta Villa Somalia | SMC
Home WARARKA MAANTA XOG CULUS: Wasiir ka tirsan P/land oo qarxiyay sirta Villa Somalia
XOG CULUS: Wasiir ka tirsan P/land oo qarxiyay sirta Villa Somalia
Xilli uusan wanaagsanayn, xiriirka dowlad goboleedka Puntland iyo madaxtooyada Soomaaliya oo aad ugu kala fogaaday hannaanka geeddi-socodka arrimaha doorashooyinka ayaa wasiir ka tirsan maamulkaasi waxaa uu eedeymo u soo jeediyay xukuumadda federaalka.
Wasiirka wasaaradda qorsheynta Puntland Cabdiqafaar Xaange ayaa sheegay in wasaaradda qorsheynta XFS ay ka been abuuratay mid kamid mashruucyada ka socda gudaha Puntland.
Waxaa uu sheegay in wasaaraddu been abuuratay mashruuca dhismaha wadada isku xirta Gaalkacyo iyo Garoowe, oo uu tilmaamay in aynaan wax lug ah ku lahayn.
Wasaaradda qorsheynta xukuumadda FS ayuu sheegay in ay baahisay in ay ku leedahay mashruucaasi, warkaasi oo uu ganafka ku dhuftay wasiirku.
Wasiir Cabdiqafaar, ayaa hoosta ka xariiqay in mashruucani xilligii maamulkii Cabdiweli Gaas mar la hakiyay kaddib markii uu soo baxay tuhun ah in ay jirto wax isdaba-marin.
Hayeeshee dadaal xukuumadda Puntland ay samaystay ay u suurtagashay in dib loo soo fasaxo mashruuca, inta dadaalkaasi ay Puntland wadayna aynaan jirin wax saamayn ah oo ay xukuumadda federaalku ku yeelatay.
Wasaaradda qorsheynta xukuumadda Soomaaliya ayaa maalmahan waday baahinta in ay mashruuca dhismaha wadada Gaalkacyo iyo Garoowe ay iyadu fulinayso.
Waxaa wasiirku uu ugu dambeyn sheegay in sheegashada Villa Somalia ee arrintaasi ay noqotay mid ay aad ula yaabaan.
Inkastoo bilihii la soo dhaafay uusan yara muuqan khilaafka siyaasadeed ee Madaxtooyada Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Puntland ayaa haddana waxaa uu maalmahani noqonayaa mid aad u soo shaac baxa.
Previous articleXAQIIQ: Kala Jab Ku Yimid Xubihii Murashaxiinta (Magacyada Dadka La Waayey)
Next article[Sawiro + Xog] Shirkii Midowga & Rooble oo bilowday iyo Farmaajo oo ku xiray shuruud (Akhriso)